Vagari Vochemachema naMuzvinabhizinesi weZanu PF kuEpworth
World Health Day Commemorations - Epworth 2
Vamwe vagari vemuEpworth vanoti havasi kufara kuti kunyange hazvo hurumende yakadzikisa mutengo hwehupfu hweRoller-Meal senzira yekuyamura veruzhinji, mumwe muzvina bhizimisi zvakare vari nehnego yebato reZanu PF mumusha uyu, vari kutengesa hupfu uhwu vachiita zvematongerwo enyika uye vari kuomesera vagari vachiti vanhu vanofanira kutanga vatenga chingwa kana mabhanzi kuti vazotenga hupfu.
Vagari vemuEpworth vaudza Studio7 kuti muzvinabhizimisi, Kudakwashe Damson veZanu PF, vari kutengesa hupfu uhwu pachitoro chavo chekubika chingwa muWard 6 panzvimbo yemabhizimisi yeOverspill vasingatevedze zvinodiwa nehurumende.
Munyori wesangano reEpworth Resident Development Association, VaPeter Nyapetwa, vaudza Studio7 kuti vanoshamisika kuti sei chitoro chechingwa chete chiri kubvumidzwa kutengesa hupfu hwakachipa uhwu.
VaNyapetwa vaudza Studio7 kuti chimwe chinosuwisa ndechekuti kunyange hazvo hurumende ichiti vanhu vanofanira kushandisa nzira dzese dzinobvumidzwa kutenga hupfu uhwu, VaDamson vari kuramba dzimwe nzira dzakaita seEcoCash.
VaMariot Nyauyanga avo vanogara kuOverspill vatsinhira nyaya iyi vachiti kana mari yemakobiri haizi kubvumwa pakutenga hupfu.
VaNyauyanga vaudza Studio7 kuti nekuda kwezviri kuitika, vanhu vakawanda muEpworth vave kutambura nenzara uye hurumende inofanira kuona zvaingaiite kuitira kuti vanhu vese vakwanise kutenga hupfu.
Mukuru weEpworth Local Board, VaBatanai Masunda veMDC vaudza Studio7 kuti kunyange hazvo hupfu hwakachipa huchitengeswa zvakanaka kune mamwe maWard muEpworth, muWard 6 kuOverSpill ndiko kune dambudziko.
Nhasi chaiko VaMasunda nevagari vanyorera kuGrain Marketing Board nehurumende vachikumbira kuti vambomira kupa hupfu kune vemabhizimisi vanotengesa hupfu vachiita zvematoingerwo enyika.
Hatina kukwanisa kutaura naVaDamson kuti timbwe divi ravo panyaya iyi.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemshoko muZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi, vaudaza Studio7 kuti manyepo ari kupomerwa nhengo yebato ravo VaDamson, vakati bato ravo rine humbowo hwekuti bato guru rinopikisa reMDC riri kuita zvematongerwo enyika pakugova chikafu chinobva kumasangano anobatsira kuHighfield neKuwadzana.
VaMugwadi vati vakatokwidza nyaya iyi kusangano yeJoint Operations Command yedunhu reHarare.
Gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, VaPaul Mavhima vanoti hapafaniri kuitwa zvematongerwo enyika pakutengesa kana kugova chikafu.